Indawo kaPat, ekwiNtliziyo yeBaddeck - I-Airbnb
Indawo kaPat, ekwiNtliziyo yeBaddeck
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLorna
Wamkelekile kuxolo kunye nobuhle beNdawo kaPat, ebekwe ecaleni kwendlela yeCabot kwiNtliziyo yeBaddeck, eNova Scotia. Ekuqaleni yayiyivenkile yoMsonto eguqulwe yaba yindawo entle elungele isibini okanye usapho olunabantwana abancinci. Yonwabela ukuzonwabisa kwiindawo zasekhaya, ukuthenga, ukutya, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokuhamba ngesikhephe. Le ndawo kukuhamba umgama kubo bonke ubuhle kunye nezinto eziluncedo ezinikezelwa yiLali.
ISelf Contained Suite, isilingi evalisiweyo enezibane ezikhanyayo.
Vula ingqiqo ngekhitshi epheleleyo.
I-Baddeck ichazwe njengesiqalo - kunye nesiphelo - seCape Breton Island eyaziwayo kwihlabathi leCabot Trail. Ibekwe ecaleni kwechibi leBras d'Or eCape Breton, le dolophu yindawo yokumisa oyithandayo koomatiloshe kunye nabo bajonge ubuhle obuzolileyo kumbindi wesiqithi.
I-Baddeck inembali ende yokuba yindawo yokumema ukuphumla kunye nokuncoma iinduli ezijikelezileyo kunye namanzi. Le ndawo yayilikhaya lonyaka lokuhlaliswa kweMi'kmaq kwaye kukholelwa ukuba yafumana igama layo kwiMi'kmaq igama elithi "Abadak", elithetha "indawo enesiqithi esikufutshane" (ebhekisa kwiKidston Island).
Abahlali basehlotyeni abadumileyo baseBaddeck nguAlexander Graham Bell, umqambi wefowuni, owakha amakhaya amabini kwindawo yakhe ebizwa ngokuba yi "Beinn Bhreagh", iScottish Gaelic ye "Beautiful Mountain".
Iindwendwe zingathumela i-imeyile nanini na xa zifuna naluphi na uncedo.